५००मा किनेको एक चिट्ठाले संजीवको चम्कियो भाग्य, रातारात बने करोडपति ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > ५००मा किनेको एक चिट्ठाले संजीवको चम्कियो भाग्य, रातारात बने करोडपति !
एजेन्सी। धेरैले भन्छन् भाग्यको कुनै भरोशा हुदैन, मात्र मेहनतले मानिसले फल पाउने गर्दछन् । तर केहि मानिसहरु अझै पनि भाग्यमा भरोशा गर्दै आएका छन् । हुनत भाग्यमा भरोशा गरेर मात्र फल पाइने भने होइन यसका लागी मेहनत र श्रम पनि आवश्यक हुन्छ । भाग्यमा विश्वास नगर्नेहरु यसलाई झुटो मान्दछन् । तर घरहरुमा रंगरोगन गर्ने एक ब्यक्ति रातारात करोडपति बनेर मानिसको जीवनमा भाग्यको समेत महत्व हुने साबित गरेका छन् । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित हिमाञ्चलको ऊना जिल्लाको चुरूडू गाउका संजीव कुमार रातारात करोडपति बनेका छन् ।’
तर यसरी सञ्जिबलाई करोडपति बनाउन न त उनको बर्षाैको मेहनत काम आयो न त उनले नै कुनै बचत गरेका थिए । सञ्जिबलाई करोडपती बनाउन उनलाई भाग्यले साथ दियो । यस पटकको तिहारमा उनले एक लट्रि टिकट खरीद गरेका थिए । जसले उनलाई रातारात करोडपति बनाइदियो । रंगरोगनको काम गरेर परिवारको पेट पाल्दै आएका संजीवले तिहारको समयमा एक चिट्ठा टिकट किनेका थिए । जसले उनलाई साढे दुई करोड भारतीय रुपैयांको धनी बनाइदियो । उनले पाँच सय रुपैया दरका २ वटा टिकट आफ्नो र छोराको नाममा किनेका थिए ‘।
छोराका लागी किनेको टिकट नंम्बर ए(४११५७७) ले साढे दुई करोड भारु जित्दै सञ्जीवलाई रातारात करोडपति बनाएको हो । बिजुली बोर्डबाट रीटायर्ड सञ्जीवका पिताले उनलाई विदेश पठाउन ट्राभल एजेन्टलाई लाखौं रकम दिए तर उनीहरुले रकम लिएर पनि धोका दिएका थिए । करौडौं रुपैया पाएपछि सञ्जीवले उक्त रकम आफ्नो सन्तानको भविष्य निर्माणमा खर्च गर्ने बताएका छन् । साथै उनले केहि समयभित्रै आफ्नै कारोबार समेत शुरू गर्ने बताएका छन् । उनकी एक विधवा बहिनीकालागी केहि रकम छुट्याएर सञ्जिबले बाकि सम्पती पछि आउनसक्ने दुखःका दिनका लागी जोहो गर्ने मनसाय छन् ।’
यी हुन् जम्मू कश्मीर टुक्रिनुका राजनीतिक घटनाक्रम